शत्रु Story by Bishweshwor Prasad Koirala
एक रात तिनी खाईपिई सुत्ने यत्न गरिरहेका थिए । तिनका मनमा धेरै-धेरै प्रकारको विचार आउन थाल्यो । तिनको जीवन कसैले असफल भन्न सक्तैन । सानोतिनो पूँजी पनि कमाइहालेका थिए; रुपैयाँ जम्मा गर्दा अरूहरूले गरेजस्तो रैतीहरूलाई पीर पारेनन् । तिनको कोही वैरी थिएनन्, यही तिनको सन्तोषको ठूलो कारण थियो । ४५ वर्षको यत्रो लामो जीवनमा तिनले कसैलाई आफ्नो शत्रु बनाएनन् । यस कल्पनाले तिनको तन्द्राको सुख बढाइरहेको थियो बेलामा तिनीमाथि लट्ठीको प्रहार पर्यो । संयोगवश लट्ठीको मुख्य चोट तिनीमाथि परेन । प्रहारकर्ताले तिनीमाथि प्रहार गरेको हो कि भित्तामाथि - यो छुट्याउन गहारो थियो ।
कृष्ण राय जुर्मुरिँदै उठे; तबसम्म आक्रमणकारी भागिसकेको थियो । 'मलाई कसले यसरी आक्रमण गर्यो होला?' तिनी विचार गर्न थाले । 'यस जीवनमा मैले कसैलाई आफ्नो शत्रु बनाइनँ, झगडा-फसादमा रहिनँ ।' कृष्ण रायलाई पैले त कसैले आक्रमण गरेको हो भन्ने कुरामा विश्वास भएन, सब तन्द्रावस्थामा भ्रमजस्तो लाग्यो; तर भित्तामा लागेरभाँचिएको लट्ठीको टुक्रा त भ्रम हुन सक्तैन । कृष्ण रायले बिछ्यौनाबाट निहुरीकन त्यस टुक्रालाई टिपे, हेरेर गम्न थाले 'को मेरो शत्रु हुन सक्छ?'
कृष्ण राय धेरै झगडामा मध्यस्थ भएका थिए । यो बडो गर्वको कुरा हो; गाउँले तिनीमाथि नै विश्चास गरी तिनलाई झगडामा मध्यस्थ तुल्याउँथे । यसैले पनि तिनको गाउँमा धेरै सम्मान थियो । तर निश्चय नै यो कामले तिनलाई धेरैको मन नपरेको बनायो होला । एक दिनको घटना उदाहरणस्वरूप तिनको सामुन्ने आउन थाल्यो । गोविन्द पण्डितको र गोरे जमदारको खेतको झगडा धेरै दिनदेखि चलिआएको थियो, तर त्यस दिनको जस्तो कुटामारी कैले भएको थिएन । कृष्ण राय सदाको जस्तै मध्यस्थ भए र बानीले प्रेरित भए झैँ ती झगडियाहरूलाई झगडाको दुष्परिणाम बुझाउन थाले । हेर गोविन्द पण्डित, हेर गोरे जमदार, झगडा गरेर के लाभ, आपसमा मिल, खाऊपिऊ र ईश्वरको भजन गर । यति उपदेशमै तिनीहरू झगडा गर्न छोड्ने भए तिनीहरू कैले पनि झगडा गर्ने थिएनन् । तिनीहरू मिल्न मानेनन् र विचरा, मध्यस्थलाई कर लागेर गोरे जमदारको पक्षमा न्याय दिनुपर्यो । य झगडामा मध्यस्थ भएर तिनले निश्चय नै गोविन्द पण्डितलाई आफ्नो शत्रु बनाए होलान् । फेरि एउटा मास्टरको र कैयाँको झगडामा न्याय कैयाँको पक्षमा हुँदा मास्टरले रिसाएर भनेको थियो, "हेर्नुहवस् कृष्ण रायजी, फैसलालाई त म आफ्नो शिरमा राख्छु तर कैयाँ कैयाँ नै हुन् काम लाग्ने छैनन् ।" एउटा झगडामा सबभन्दा निर्दोष काम हो, त्यो झगडाको मध्यस्थ हुनु तर कुनै पनि मध्यस्थ दुवै पक्षको समर्थक हुन सक्तैन । मध्यस्थले एउटा न एउटाको शत्रु हुनैपर्छ - कृष्ण रायले बिउँझेझैँ यो ज्ञान आर्जन गरे ।
विचार गर्दागर्दै कृष्ण रायले रेलको डब्बामा भएको झगडा सम्झे; हाटमा तिनीद्वारा धक्का खाई लडेको एउटा मान्छेलाई सम्झे; तिनले निकालिदिएका नोकरहरूलाई सम्झे; गरिब तर इर्ष्यालु दाजु-भाइलाई सम्झे; जो तिनको उन्नति देखिसहँदैनथे । अरूको त के कुरा आफ्नै पोष्य पुत्रमाथि पनि उनलाई भरोसा थिएन । चाँडै नै सम्पत्तिको मालिक हुन उसले जे पनि गर्न सक्छ, आखिर आफैँले जन्माएको छोरो त ...!
घटनालई बिर्सने प्रयत्न गर्दै कृष्ण राय निदाउने निहुँले बिछ्यौनामा बुङ्ग लडे । शत्रुता पनि कस्तो व्यापक सम्बन्ध रहेछ ? दुनियाँमा कोही पनि मित्र हुँदैनन् सब शत्रु सबै वैरी नै हुन्छन् । कसले भन्छ अकारण नै कोही शत्रु हुँदैन ? माने अकारण कोही कसैको शत्रु हुँदैन, तर झगडाको निहुँ कति सजिलै पाइन्छ । कृष्ण रायले धेरैसँग सङ्गत गरेनन्, तर जतिसँग गरे सबैलाई तिनीसँग 'बाप वैर साध्ने' कुनै न कुनै निहुँ दिए । कस्तो अचम्म निर्दोष कुरामा पनि विषालु साँपजस्तो वैनी बनाउने साधन लुकरहेको देखिन्छ !
भोलिपल्ट यो घटनाको जाँच हुँदा पुलिसको इन्स्पेक्टरले तिनलाई सोध्यो- "तपाईँलाई कसैमाथि शङ्का हुन्छ ?"
कृष्ण रायले गम्भीर भएर उत्तर दिए - "रामे, केदार युवक, गोविन्द पण्डित, कन्हैया मास्टर, बुधी, लीला, पुष्पराज, रामचन्द्र पराजुली ।"